झींगा संग केसर भिक्षु माछा | बेजिया
झींगा संग केसर भिक्षु माछा
मारिया vazquez | 09/01/2022 10:00 | Pescado
आज हामी तपाईंलाई बेजियामा एक तयारी गर्न प्रोत्साहित गर्छौं धेरै सरल माछा नुस्खा र भविष्यका उत्सवहरूको लागि उत्तम: झींगाको साथ केसरन भिक्षु माछा। एउटा नुस्खा जसमा तपाईंले केही क्ल्याम वा सिपीहरू थप्न सक्नुहुन्छ ताकि क्यासरोल थप फैलियोस्।
El झींगा संग केसर भिक्षु माछा यो एक साधारण नुस्खा मात्र होइन, तर एक छिटो, धेरै छिटो छ! यसलाई तयार गर्न तपाईंलाई २० मिनेट भन्दा बढी समय लाग्दैन, जसले तपाईंलाई बिहानको समयमा अन्य मामिलाहरूमा ध्यान दिन अनुमति दिनेछ। के तपाइँ यसलाई मन पराउन थालेको छैन?
तपाईं यो नुस्खा monkfish संग तर अन्य संग पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हेक जस्तै माछा, बस समय समायोजन। Bezzia मा हामी यो एक उत्कृष्ट विकल्प पाउँछौं जब हामीसँग अतिथिहरू छन्। वास्तवमा, जब हामीले महसुस गर्यौं कि हामीले नुस्खा चित्रण गर्न फोटो खिच्नु पर्छ, हाम्रा पाहुनाहरूले पहिले नै यसको आधा खाइसकेका थिए।
20 झींगा, छिलेको
1/2 गिलास वाइन
२ गिलास माछाको शोरबा (तपाईले भिक्षु माछाको टाउको र झींगाको गोलाबाट एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ)
कम भाँडोमा तेल तताउनुहोस् र लसुन saut sa एक छिन।
जब रंग लिन थाल्छ, पीठो सम्मिलित गर्नुहोस् र मिश्रण गर्दा एक मिनेटको लागि पकाउनुहोस्।
पछि सेतो रक्सी थप्नुहोस् र यसलाई केही मिनेटको लागि कम गर्न दिनुहोस्।
त्यसपछि, शोरबा हाल्नुहोस् माछा र केसर। मिलाउनुहोस् र केही मिनेटको लागि पकाउनुहोस्।
त्यसकारण, अनुभवी monkfish fillets थप्नुहोस् छालाको छेउमा माथि राखेर चार मिनेटको लागि पकाउनुहोस्, समय-समयमा क्यासरोल हलचल।
चार मिनेट पछि, rapa tenderloins र घुमाउनुहोस् झींगा थप्नुहोस्। 2-3 थप मिनेटको लागि पूरै पकाउनुहोस्, क्यासरोललाई सार्नुहोस् मानौं तपाईं कोड अल पिल पिल तयार गर्दै हुनुहुन्छ।
तातो बन्द गर्नुहोस् र तातो झींगासँग केसर स्नफ सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » Pescado » झींगा संग केसर भिक्षु माछा
२०२१ मा लोकप्रियता पाएका ४ पोडकास्टहरू, तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनुहोस्!